Igbo, Romans, Lesson 031 -- The Resurrected Christ Fulfills his Righteousness in us (Romans 5:6-11) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 031 (The Resurrected Christ Fulfills his Righteousness)
C - Ihe Mkpata Mgbe Anyi Na-ezi Ozi Na Chineke Na Enmen (Ndi Rom 5:1-21)
2. Kraịst ahụ e mere ka o si n’ọnwụ bilie mezuo ezi omume ya n’ime anyị (Ndi Rom 5:6-11)
NDI ROM 5:6-8
6 N'ihi na mb wee ayi nọ nādighi ike, na mb duee oge-Ya, Kraist nwuru n'ihi ndi nādighi-asọpuru Chineke. N'ihi na ọ gaghi-abu onye ezi omume, bú onye ezi omume; ma ikekwe n’ihi ezigbo mmadụ mmadụ ga-anwa anwa ịnwụ. 8 Ma Chineke na-egosi ihunanya nke aka Ya n’ebe anyi no, nihi na mgbe anyi bu ndi nmehie, Kraist nwuru n’ihi anyi.
Mgbe mkpughe nke iwe Chineke na ikpe ezi omume, Pọl duziri anyị ka anyị chegharịa nke ọma, na mmebi nke mmụọ ka anyị nwee ike ijikere ịnabata ikwenyesi ike n'okwukwe, jide nnukwu olile anya ma gaa n'ihu n'ịhụnanya nke Chineke. Ọ bụ ezie na anyị abanyela na nzọpụta a, anyị kwesịkwara icheta ihe gara aga anyị ka anyị wee ghara ịdị mpako.
Onyinye nile nke Mo Nso, udo, amara, ima, ido-ọcha, okwukwe, olile anya, na ntachi obi abughi nke anyi onwe anyi, ma obu ikike nke mmadu. Ha bụ ọnwụ nke ọnwụ Jizọs, onye nyere ndụ ya abụghị maka ụmụnne ya ọ hụrụ n'anya, kama maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, n'etiti Chineke na-ahụ anyị. Mmadụ dị ka bọmbụ nke ihe ọjọọ. Ọ na-emerụ ọ bụghị naanị onwe ya, kamakwa ndị ọzọ. Ntem, Kraist ama ama nnyịn onyụn̄ akpa ke ibuot nnyịn.
Site na obi umeala a, anyị na-ahụ oke ịhụnanya nke Chineke. Ọ dịkarịghị mgbe anyị na-achọta onye ọ bụla dị njikere ịchụ ntụsara ahụ nke ya, oge ya, akụnụba ya, na izu ike ya, ma ọ bụ ndụ ya, iji kwalite ọdịmma nke nwanne ya na-arịa ọrịa. Ikekwe mmadụ ga-enye ndụ ya maka ala nna ya, ma ọ bụ ụmụ ya, ma ọ bụ nne ga-eji ndụ ya chụọ àjà maka ụmụ ya, mana onweghị onye ga-adị njikere inye ndụ ya maka ndị omempụ na ndị iro jụrụ, ma e wezụga Chineke.
Ukpụrụ a bụ njedebe nke okwukwe anyị. N’ebe anyị bụ ndị iro inupụrụ Chineke isi, Onye Nsọ hụrụ anyị n’anya. O so ndị mmehie emekọ ihe, n’Ọkpara ya ma nwụọ ka e kpuchie mmehie nke ndị gburu ya. Ọ dighi onye ọ bula nwere ihu-n'anya kari nka uku, kari kwa ndu-ya n'ihi ndi-enyim. Site n'okwu a nke Kraist, anyị hụrụ na ọ kpọrọ ndị iro ya, “ndị enyi” ya, n'ihi na ọ hụrụ mmadụ niile n'anya, ọbụna ruo ọnwụ.
Ohụnanya nke Chineke n’ebe anyị nọ dị ukwuu nke na ọ gbaghaara anyị mmehie anyị n’elu obe tupu anyị emehie, yana tupu amụọ anyị. Yabụ, ọ dịghị anyị mkpa itinye mgbali igosipụta onwe anyị, kama ọ bụ naanị ịnara amara nke Chineke, ma kwenye na e zie anyị ike, mgbe ahụ a ga-eyi ike nzọpụta nke Jizọs n'ime anyị.
NDI ROM 5:9-11
9 O kari kari, ebe emere ka ayi guzosie ike ugbua site n’ọbara Ya, a ga-azoputa anyi iwe site na Ya. 10 N’ihi na ọbụrụ na mgbe anyị bụ ndị iro ka anyị na Chineke dị n’udo site n’ọnwụ nke Ọkpara Ya, ọtụtụ ihe, ebe anyị na ndị ọzọ dị n’udo, a ga-azọpụta anyị site na ndụ Ya. 11 Ma ọ bughi nání nka, kama ayi nānya kwa isi na Chineke site n’aka Onye-nwe-ayi Jisus Kraist, Onye esitewo n’aka-ayi nweta ezi-okwu ahu.
Ugbu a, ụrịa ọ andụ, nweekwanu obi uto! Ayi aguwo n’onye ezi omume n’iru Chineke n’ihi okwukwe anyi na Kraist. Ekwensu enweghi ikike ime mkpesa megide anyị. Ọbara Kraist na-asachapụ ma anụ ahụ anyị na mkpụrụ obi. Ọnọdụ ọhụrụ a ga-adịru mgbe ebighi-ebi, n’ihi na ịrịọ arịrịọ Jizọs ga-azọpụta anyị iwe nke Chineke n’ụbọchị ikpe.
Pol na nkowa okwu ndia nke di omimi banyere ayi banyere nzoputa.
Nke mbu: Anyị na Chineke dịghachiri mgbe mgbe anyị biri n'egwu na nnupu isi megide ya. Ndozi a bụ enweghị nkwekọrịta anyị, na enweghị akwụ ụgwọ nke ọnụahịa ahụ. N’ezie, anyị enweghị ike ma bụrụ ndị erughị eru ịmalite ngbanwe a, nke bụ onyinye amara. Ime ka udo a dị naanị site na Ọkpara Chineke, onye bịara n'anụ ahụ wee nwụọ n'ihi anyị.
Nke abụọ: Ọ bụrụ na ọnwụ Jizọs kpatara nsonaazụ mgbanwe ndị a, lee ka ndụ nke Kraịst dị ndụ ga-esi nweta nzọpụta! Ugbu a anyị kpachapụrụ anya na kpebisie ike na Chineke, anyị chọrọ iji obi anyị niile mee uche ya ka ike ya wee rụọ ọrụ n'ime anyị. Ya mere, ndu ebighebi, nke abughi ihe ozo ma obu ndu nke Kraist n’onwe ya, abiarute anyi site n’okwukwe anyi n’ebe Nwa nke Chineke no bu onye bu Mmuo Nso, ya bu, ihunanya Chineke. Amaokwu Chineke ndị a na-egosipụta udo, ọ gladụ, obi iru ala, na otuto n’obi anyị. Mụọ nke Onye-nwe bụ nkwa nke ọdịnihu anyị dị ebube, n’ihi na onye ọ bụla nke na-anọ n’ịhụnanya, na-adigide n’ime Chineke, na Chineke n’ime ya.
Nke ato: Pọl ji obi ike bulie ụdị ebube dị elu na ịsị, “Anyị na-a ụrịkwa ọ Godụ na Chineke”, nke pụtara na Onye Nsọ n'onwe ya bi n'ime anyị, anyị na-anọgidekwa n'ime ya, n'ihi na ọ bụghị naanị kemgbe anyị. mee ka ya na ya dị ná mma, ma mmụọ nsọ, onye bụ Chukwu n’onwe ya, emebere ahụ anyị ụlọ nsọ nke ịbụ isi nke Chineke. Do nā youuri ọ atu n'iru Chineke n’etiti gi? Bụrụ onye nwoke gbajiri agbaji, were onwe gị dịka ihe efu, fee Onyenwe gị ofufe, lee ọmarịcha ọkwa nke ọnwụ Kraịst wulitere gị.
EKPERE: Anyi na-egbu ikpere n’iru ike nke ekwuputara n’elu Jizos a kpogidere n’agha, ma nyefee aru anyi n’ebube ihunanya nke Chineke, tinyere anyi ndi obi ojoo. Anyị achọghị iche banyere onwe anyị, kama ịbanye n'oké osimiri nke ịhụnanya Chineke.
Olee otu ihunanya Chineke si puta?
Page last modified on January 26, 2021, at 03:10 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)